Ny nosy romantika indrindra eto amin'izao tontolo izao
Inspiration Zava-bita & Nosy
Ny Nosy 9 Romantika Manerantany
Ny Romance of the Islands
Ny faritra tsy misy rano ao Bora Bora dia toa manitatra tsy mitsaha-mitombo. Alexander Hafemann / Getty.
Ny nosy, lehibe sy kely, voarakitra ary any an-tany lavitra, dia misambotra ny fisainan'ireo mpifankatia. Manakaiky ny rano sy manan-karena amin'ny fiainana an-dranomasina, ireo nosy ireo dia miavaka amin'ny fialamboly mahafinaritra lavitra ny trano. Ny sasany dia mahatsapa ny moka sy ny fiandohana; Ny olombelona dia mirakitra ny famindram-pon'ny rivotra sy ny singa. Ny hafa, miaraka amin'ny fanjavonan'ny sivilizasiona, dia manolotra tontolo tsy miankina amin'ny zava-drehetra izay mety ho tadiavin'ny roa tonta. Na inona na inona ilay nosy nofidianao hitsidihana, ny fahatsapana an'ireny toe-javatra ireny dia azo tsapain-tanana. Tsidiho ny ranomasina amin'ny dingana manaraka.
Ny nosy St. Lucia
Ny tora-pasika nanaraka an'i Sandals Grand St Lucian. Susan Breslow Sardone.
Amin'ireo nosy rehetra any Karaiba (ary maro ireo, ny Bahamas ihany no milaza fa 700), anisan'ireo am-pitiavana indrindra i St. Lucia. Ny marika amam-boninahitra avy amin'ny Piton Tendrombohitra mafy, ny tora-pasika mahafinaritra, sy ny Ranomasina Karaiba mafana dia azo antoka fa mahatonga azy io ho anisan'ny mampiavaka indrindra. Ary matetika ny sidina avy any Etazonia no mahalasa azy io.
Mivoaha ary jereo ny nosy, mamela ny lalanao mankany amin'ny tsenan'i Castries mba hikarakarana ireo zavamanitra St. Lucian izay mitombo amin'ny hazo, ary mandehana any Soufriere amin'ny sakafo amoron-dranomasina vaovao amin'ny alàlan'ny seranana.
Saint Lucia dia manana karazana fialamboly amam-pihetseham-pitiavana, samy tia manamboninahitra sy ny ankamaroany (miaraka amin'ny fepetra sasany). Anisan'ireo mampivelatra ny mpifankatia izy ireo:
Jade Mountain : rindrina telo ary ny fahefatra dia misokatra tanteraka, mitarika mankany amin'ny dobo filomanosana manokana
Anse Chastanet : Samy hafa be ny efitrano tsirairay ary ilaina avokoa ny dingana nomerika rehetra
Sandals Grand St. Lucian: Manolotra bungalows sy rondoval ny dobo maromaro miaraka amin'ny dobo manokana
Ny nosy Kauai
Ny nosy lehibe any Hawaii dia mendrika hikaroka, fa ireo mpifankatia romotra miaraka amin'ny fahatsapana ny zava-niainana dia mety ho tia an'i Kauai.
Manatena fahatsapana toerana amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana helikoptera an'ny "The Garden Isle", mampiseho ny morontsirak'i Na Pali sy ny hantsan-dranomamy misy an'i Waimea Canyon, manondraka ny renirano, ary tora-pasika tsy voatsabo. Na mandroso ny lalana Kalalau 11km mitazana an'i Na Pali. Amin'ny vintana rehetra dia ho hitanao amin'ny lanitra avana rehetra izany. Miresà ary milentika any amin'ny toeram-ponenana fotsy fotsy fotsy 43. Ary mba fialam-boly fotsiny, dia makà horonantsarimihetsika iray: Misy horonan-tsary maherin'ny 60 natao teto, anisan'izany ny Jurassic Park, Raiders of the Lost Ark, ary Pasifika Atsimo.
Ny nosy Bora Bora
Misy nosy mihoatra ny 100 ao amin'ny Oseana Pasifika Atsimo. Anisan'izy ireo i Tahiti , Moorea, Tahaa, ary Huahine, ka hampifalifaly mpivady ny mpivady. Nofehezin'i Bora Bora tamin'ny alàlan'ny torapasika nandalovan'ny rano madio sy hazo palmie namboarina.
Tsidiho ny lakandrano, milomano, misotro rano , mandeha an-tongotra eny amoron-dranomasina. Mandeha ny Tendrombohitra Pahia na ny Tendrombohitra Ohue. Ary mifohaza fotsiny, mifohaza ary miaraha amin'ny orinasa tsirairay.
Mifidy fialan-tsasatra izay manome bungalows ambonimbony , noho izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity karazana trano tsy manam-paharoa ity izay manolotra mivantana ny rano mafana. Anisan-dry zareo:
Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa : bungalows mihoatra ny 100 vita bozaka vita amin'ny tohadrano eo ambonin'ny trano lay
Le Meridien Bora Bora: fampiantranoam-bahiny frantsay
Seasons Fourteen Bora Bora : toerana misy ny honeymooned Jennifer Aniston & Justin Theroux
Ny Nosy Avaratra any Nouvelle-Zélande
Mandehandeha any amin'ny Nosy avaratr'i Nouvelle-Zélande. Getty.
Talohan'ny Mpanjakavavin'ny Tsangambaton'i Tsiroanomandidy, dia nisy olona maro be tao Nouvelle Zélande, ary matetika dia tany amin'ny tontolo hafa, dia tonga teo ny divay, ny bibidia ary ny onja teny amoron-dranomasina izay tsy dia nisy loatra.
Tsidiho ny Ninety Mile Beach any amin'ny faritra avaratra (raha ny marina dia efa 55 kilaometatra io, fa mbola mahagaga ihany). Ny dongy goavambe dia toa miavaka amin'ny tany efitra. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mitaingina bisikileta ATV.
Jereo ireo toeram- pialam-boly Relais & Chateaux ao amin'ny Nosy Avaratra ao Nouvelle Zélande. Na ny tranonkalany aza dia mampientam-po:
Kauri Cliffs: toeram-pambolena mahavariana misy trano fialamboly al fresco spa
Cape Kidnappers: Ny fomba fijery tsy voafetra dia mampahatsiahy ireo tia ny fahalinan'ny tany sy ireo fahafaha-manao tsy mety
Ny nosy Capri
Nosy malaza any amin'ny Ranomasin'i Naples miaraka amin'ny seranana malaza, Capri dia nalaza tamin'ny tohodranon'ny fiaramanidina ary fantatra ho kianja filalaovana ho an'ny mpanankarena sy malaza eran-tany.
Mankalazà eo ambanin'ny Blue Grotto, lava-dranom-borona maitso, ary ny lakolosy Faraglione di Mezzo. Samy mila sambo izy ireo. Aorian'izay, dia manasà tena any amin'ny kafe iray ety ivelany miaraka amin'ny lemoncello misy veromanitra vita amin'ny voankazo avy amin'ny hazo fihinam-boa manodidina.
Ny traikefa an-dolce vita ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy tovovavy miafina:
Hotel Gatto Bianco: manolotra sanda sarobidy eo afovoan-tanàna misy saka fotsy amin'ny toeram-ponenany
Hotel Canasta: trano fandraisam-bahiny manana hazo fihinam-boa manodidina ny dobo filomanosana
Villa Brunell: dobo filomanosana ary toerana tsara tarehy
JK Place Capri: trano maoderina tsara tarehy, nefa tsara tarehy, Mediterranean dia mandeha fiara avy ao amin'ny kianja lehibe Capri
Hamilton Island, Aostralia
Voahodidina ny harambato Great Barrier, any amin'ny tendrontany avaratr'i Hamilton, ny faritr'i Qualia. Ankoatry ny fahanginana sy fahatoniana, dia tokony ho 16 taona fara fahakeliny ny vahiny.
Fantaro ny harambato Great Barrier amin'ny alalan'ny snorkeling, fiantsonan-daka na amin'ny fitsidihan'ny vatohara. Na mitsangatsangaha amin'ny iray amin'ireo dobo roa, mihodina ao amin'ny trano famakiam-boky, na mitsidika ny toeram-pitsaboana sy spa.
Ny trano dia trano 60 tsy miankina avy amin'ny hazo sy vato. Fomba nentim-paharazana ny ati-trano. Manana toeram-pisakafoanana roa ilay toeram-pitsangatsanganana, ary afaka mampivelatra ny tenanao mihitsy aza ianao amin'ny fananana ny chef mahandro ho anao ao amin'ny efitranonao manokana ao amin'ny pavilion. Ny fotoana hifaneraserana dia amin'ny filentehan'ny masoandro, fanakanana cocktails ao amin'ny Hamilton Island Yacht Club.
Ny nosy Santorini
Sary avy any Santorini. Getty.
Misy ny nosy 6000 manerana ny morontsirak'i Gresy, tsy misy afa-tsy 200 eo ho eo. Amin'ireo, tsy manambany romantika tahaka ny masoandro miposaka Santorini, izay nojerena be indrindra. Ny fahitana ireo tsangambato fotsy hoditra fanta-daza nataon'i Santorini manoloana ny Ranomasin'i Aegean manga dia mampitombo ny fo. Ary hampitombo ny fiantraikan'ny loza, ny fivoahana sy ny hafanana marefo indraindray dia mampahatsiahy ireo mpitsidika fa matory fotsiny ny volkano velona ao Santorini.
Santorini dia manana fialam-boly mahatalanjona, mipetraka manodidina an'i Fira ary, farafahakeliny, Oia. Mandritra ny andro dia mandehana an-tongotra ... raha afaka mangalatra ny tenanao avy eny amoron-dranomasina ianao. Ny fotoana tsara indrindra hotsidihina dia ny volana oktobra, rehefa matevina ny vahoaka. Ireo toeram-pialan-tsasatra dia mbola misokatra hatramin'ny Novambra
Tsy hahita hotely lehibe any Santorini ianao, fa afaka mifidy avy amin'ny villas, trano fandraisam-bahiny spa.
Ny Nosy Maldives
An-jatony sambo an-dranomasina any amin'ny Ranomasimbe Indiana, ny Maldives dia trano bungalow ambonimbony kokoa noho ny any an-tany hafa. Izany no antony iray mahatonga ny romantika vonona ny hanidina mandritra ny ora maromaro mba hahatongavana any amin'ireo nosy afa-milatsaka kilaometatra vitsivitsy avy any India.
Eo am-panaovana ianao, dia mitsambikina eny amin'ny rano mazava tsara, feno trondro marevaka. Manaova sakafo amin'ny subsix ao Niyama, izay misy metatra metatra ety ambanin'ny ranomasina. Ho tsapanao fa toy ny hoe ao anaty aquarium ianao.
Fonenana tsy mahazatra no mahazatra eto amin'ity faritra ity. Diniho izao:
Niyama: toeram-pitsangatsanganana ao amin'ireo nosy roa, iray antsoina hoe "Play" miaraka aminà villas amin'ny fasika fotsy ary ny iray hafa "Chill", izay misy toerana fisakafoanana sy spa
Seasons Four Maldives ao Kuda Huraa: bungalows 52 izay voahodidin'ny ranomasina ary mivalomamy miaraka amin'ny voninkazo tropikaly
Seasons Four Maldives ao amin'ny Landaa Giraavaru: haitraitra maizim-pito marefo any amin'ny afon-dasy lavitra
Ny Nosy Manhattan
Tsy ny mpivady rehetra no mihevitra ny nosy iray any afovoan-tany, fa ny fialam-boly ankafiziny. Angamba izany no mahatonga an'i Manhattan ankasitrahan'ny mpivady mariazy marobe sy ireo hafa izay maniry fientanentanana, be pitsiny ary tsy ampoizina manerana ny zoro rehetra.
Mba hanaovana ny ankamaroan'ny fotoananao ao an-tanàna dia mandehana. Tsy ny flatan'i Manhattan ihany no ao, fa ny ankamaroan'izy ireo dia eo amin'ny milina ahodin-tseranana ka mora ny miditra. Ary misy tanàna mahagaga hita! Ny tanàna Greenwich, Chinatown, ny Lower East Side ary Central Park dia samy manana ny toetrany. Saingy raha tsy te-hanaraka ny fampisehoana Broadway ianao, alohan'ny Times Square. Feno mpizahatany tsy manam-paharoa izay tsy mahafantatra fa ny tena New York marina dia mihoatra ny azy.
Ireto ny trano fandraisam-bahiny romantika ao an- tanàna mba hitadidy ny fijanonanao.
Nude Beach Guide and Directory Directory
Torohevitra momba ny Budget Travel for Antigua sy Barbuda
Mérida, renivohitr'i Yucatan
Top 5 Nosy Antitran-dàlana Atsimo-Atsinanana
Karazan-tsakafo vaovao Sinoa any Washington DC
Opa! Manana Teny ho azy ireo ny Grika
Ny Paroasin'i Chingay any Singapour - Fahatsiarovana ny Taom-baovao Sinoa
Fivarotana an-dàlam-piaramanidina mivezivezy ao amin'ny seranam-piaramanidina: Ny zavatra tokony ho fantatra
Miala avy ao Porto mankany Santiago de Compostela
Kalifornia amin'ny volana Mey
Ny Praiminisitra Art Albuquerque dia manandratra ny tanàna
Ny marina momba ny fizaran-taona ririnina ao Thailandy
Fomba 8 mba hisorohana ny fitsapana fanampiny amin'ny Administratif Security
Fikarohana ny tanànan'i Rue Mouffetard / Jussieu any Paris
Aiza no hankalazana ny vakansy any Chicago